China eyi eguzogide ọgwụ Steel efere Manufacturer na Supplier | Kunda
Efere ígwè ndị na-eguzogide na-ezo aka na ngwaahịa ndị efere pụrụ iche ejiri n'okpuru ọnọdụ akwa. Ka ọ dị ugbu a, efere ndị na-eguzogide ọgwụ ndị a na-ejikarị arụ bụ efere nke obere carbon ma ọ bụ nchara ala dị ala nke nwere ezi ike na plasticity site na ịgbado ọkụ na-arụ ọrụ na ọkpụrụkpụ nke ihe mkpuchi na-eguzogide oyi na akwa ekweghị ekwe na njiri mara mma kacha mma ngwaahịa.
Okwesiri iru n’elu nwere ike iru HRc58-62
Sweden IGIHE 400, HARDOX450. NKWOX600, SB-50, SB-45
France Ibo 400 FORA500, Creusabro 480. Ogbohu 8000
MN13 Nnukwu efere na-eguzogide ọgwụ manganese ： Nchịkọta manganese bụ 130%, nke bụ ihe dịka 10 ugboro nke nchara na-eguzogide ọgwụ, ọnụahịa ahụ dịkwa elu.
Ọkpụrụkpụ 3-250mm: Common size: 8/10/12/14/16/18/20/25/30/40/50/60
obosara 1050-2500mm Common size: 2000 / 2200mm
Agba nkịtị: 8000/10000/12000
2.Mejupụtara wear-eguzogide efere:
Ọ bụ a efere ngwaahịa mere site surfacing a ụfọdụ ọkpụrụkpụ nke na-eyi na-eguzogide oyi akwa na elu ekweghị ekwe na magburu onwe na-eyi na-eguzogide n'elu nkịtị nkịtị carbon nchara ma ọ bụ ala alloy nchara na ezi ike na plasticity. Uwe mkpuchi mgbochi na-abụkarị 1 / 3-1 / 2 nke mkpokọta niile.
l The-eyi na-eguzogide oyi akwa tumadi mere nke chromium alloy, na ndị ọzọ alloy mmiri dị ka manganese, molybdenum, niobium, na nickel na-kwukwara.
Ọkwa : 3 + 3、4 + 2、5 + 3、5 + 4、6 + 4、6 + 5、6 + 6、8 + 4、8 + 5、8 + 6、10 + 5、10 + 6 ụ10 + 8、10 + 10、20 + 20
3. Ọrụ dị
Efere ndị na-eguzogide ọgwụ nwere ike inye usoro nhazi: akụkụ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ dị iche iche, CNC ịchacha oche, oche ndị na-emepụta CNC, akụkụ ndị arch, akụkụ ndị agbakwunyere, akụkụ ndị pụrụ iche, akụkụ profaịlụ, ihe ndị mejupụtara, akụkụ, ibe na nhazi ndị ọzọ.
4.Ngwa nke eyi efere
1) rlọ ọrụ ike: igwe na-agba ọsọ na-agba ọsọ, na-ekpo ọkụ ọkụ, ihe ngbanye ájá, ntụpọ ntụ, eriri eriri ịwụ, nkewa nke na-ejikọ ọkpọkọ, ihe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, ihe na-ekpo ọkụ na igwe na-ekpocha ihe, ihe na-ere ọkụ, ọkụ na-ada hopper na foneelu liner, ikuku preheater mgbodo nchedo tile, separator ndu agụba. Akụkụ ndị a dị n'elu enweghị ihe ndị dị mkpa na ike na-eyi nkwụsi ike nke efere ígwè na-eguzogide ọgwụ, na efere ígwè na-eguzogide ọgwụ na ọkpụrụkpụ nke 6-10mm na ihe nke NM360 / 400 nwere ike iji.
2) Ogige ikuku: inye nri na ihe mkpuchi hopper, ihe mkpuchi hopper, eriri mmiri, ihe mkpuchi ala, ihe nchịkọta uzuzu cyclone, coke na-ekpuchi efere, ihe mkpuchi bọl, na-eme ka ihe na-edozi ahụ, na-akụ mgbịrịgba na isi oche, n'ime ime nke ịwụcha bọket, mgbanaka feeder, dump gwongworo ala efere. Ebe oru nke ogige unyi siri ike, ma enwere ụfọdụ ihe achọrọ maka nkwụda ahụ na iyi mgbochi nke efere na-eguzogide ọgwụ. A na-atụ aro ka ị jiri efere nchara na-eguzogide ọgwụ nke NM400 / 450 HARDOX400 na ọkpụrụkpụ nke 8-26mm.
3) Cement osisi: chute lining, ọgwụgwụ bushing, cyclone ájá mkpoko, powder separator agụba na ndu agụba, ofufe agụba na lining, imegharị ịwụ lining, ịghasa ebu ala efere, piping nzukọ, frit jụrụ efere lining, ebu liner. Akụkụ ndị a chọkwara mbadamba ígwè na-eyi akwa na-eguzogide ọgwụ dị mma na nkwụsị corrosion, na efere ígwè ndị na-eguzogide ọgwụ nke NM360 / 400 HARDOX400 nwere oke nke 8-30mmd nwere ike iji.
4) Loading igwe: ebutu igwe nri yinye efere, hopper liners, jidere UM UBARA, akpaka dump gwongworo, dump gwongworo ozu. Nke a chọrọ akwa mbadamba na-eguzogide akwa nwere oke nguzogide na ike. A na-atụ aro ka ị jiri efere nchara na-eguzogide ọgwụ na ihe nke NM500 HARDOX450 / 500 na ọkpụrụkpụ nke 25-45MM.
5) Ngwuputa igwe: linings, pupụtara, ebu linings na baffles nke ịnweta na nkume crusher. Akụkụ ndị dị otú a chọrọ nguzogide akwa akwa dị elu, ihe dịnụ dị NM450 / 500 HARDOX450 / 500 efere ígwè na-eguzogide ọgwụ nwere oke nke 10-30mm.
6) Construction machinery: ciment pusher nha nha efere, ihe towergwakọta elu, igwekota lining efere, ájá mkpoko lining efere, Adobe igwe ebu efere. A na-atụ aro ka ị jiri efere nchara na-eguzogide nke NM360 / 400 nwere ọkpụrụkpụ nke 10-30mm.
7) Mwube ígwè: Loaders, bulldozers, excavator ịwụ efere, n'akụkụ agụba efere, ịwụ ala efere, UM UBARA, Rotary mkpọpu ala igwe aku mkpara. Kinddị igwe a chọrọ efere nchara siri ike karị na-eyi akwa na-eguzogide abrasion dị oke elu. Ihe dịnụ bụ NM500 HARDOX500 / 550/600 nwere ọkpụrụkpụ nke 20-60mm.
8) Igwe igwe: igwe igwe na-agbazi ígwè, na-ebugharị ikpere ụkwụ, igwe na-eme ka igwe na-eme ihe mkpuchi, ihe nchacha ihe. N'ihi na ụdị ọrụ a chọrọ akwa okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ ma sie ike nnukwu akwa akwa. Ya mere, a na-atụ aro ka ị jiri HARDOX600HARDOXHiTuf usoro iyi akwa na-eguzogide ígwè.
9) A pụkwara iji efere ígwè ndị na-eguzogide ọgwụ na-arụ ọrụ na cylinders sand, blades, ogige dị iche iche na-ebu ibu, ígwè ọrụ na akụkụ ndị ọzọ, na-ebu akụkụ, usoro ụkwụ ụgbọ okporo ígwè, mpịakọta, wdg.
Yiri efere na-eguzogide ọgwụ, yiri efere, jiri efere ígwè
Eyi na-eguzogide ọgwụ efere na-ezo aka pụrụ iche efere ngwaahịa nke na-eji na nnukwu ebe eyi condition.Wear-eguzogide ọgwụ ígwè efere nwere nnukwu abrasion eguzogide na ezi mmetụta arụmọrụ. Ọ ga-ebipụ, kpudo, ịgbado ọkụ, wdg. Ọ nwere ike jikọọ na ndị ọzọ owuwu site ịgbado ọkụ, plọg ịgbado ọkụ na bolt njikọ, Ọ nwere àgwà nke na-azọpụta oge na-adaba adaba na usoro nke mmezi.
Ugbu a ọtụtụ-eji metallurgy, unyi, ciment, ọkụ eletrik, iko, na Ngwuputa, ụlọ ihe, Adobe na ndị ọzọ ọrụ. Tụnyere ihe ndị ọzọ, ọ bụ nke ukwuu na-eri-irè na e-họọrọ site ọzọ na ndị ọzọ ụlọ ọrụ na-emepụta.
Ọkpụrụkpụ 3-120mm Obosara: 1000-4200mm Ogologo: 3000-12000mm
Eyi-eguzogide Steel Comparison Isiokwu
Nke gara aga: Weather eguzogide ọgwụ Steel efere
Osote: Carbon Steel efere